Kutungamirirwa kweHuman Resources - ITS Tech School
Chii Chinowanikwa Pfuma?
Kufambira mberi Kwemabasa Pabasa
Mubairo uye Zvibatsiro Zvehutano
Kudzidza uye Kuvandudza
Kutarisira Mitemo Inobatsira Basa
Kuzivikanwa neZvo kunze Kwezvinhu
Gamuchira Kudzidziswa Kwevanhu
Tsanangura chikamu cheHurm mumasangano.
Kuita uye kuongorora chikamu chemaitiro makuru eHRM.
Sangano rimwe nerimwe, rakakura kana ridiki, rinoshandisa mari yekushandisa mari yekuita kuti bhizimisi rishande. Guta rinosanganisira mari, zvinhu, kana michina inoshandiswa kugadzira mubhadharo webhizimisi. Semuenzaniso, nzvimbo yekutengesa inoshandisa mabhuku uye mabhuku, asi sangano rekupa mazano rinogona kunge rakagadzirisa zvirongwa kana zvivako. Pasinei nebhizinesi, masangano ose anoita zvinhu nenzira yakafanana: ivo vanofanira kunge vane vanhu kuti vaite basa ravo guru kune avo. Ichi chichava chekufungisisa kwedu zvose kuburikidza nehuwandu: makore emari inoshandisa kushandisa ukama hwekuvaka mano uye unyanzvi.
Human Resource management (HRM) ndiyo nzira yekushandisa vanhu, kuigadzirira, kuvabhadhara, kuumba mazano ekuratidza navo, nekugadzira nzira yekudzibata. Semunda, HRM akawana huwandu hwakawanda mumakore makumi maviri apfuura, achichipa chikamu chakanyanya kukosha mumasangano anhasi. Kare, HRM yakaronga kushandiswa kwemari, kutumira zvipo zvezuva rokuzvarwa kune vamiririri, kugadzira masangano ehurongwa, nekuita kuti maumbirwo akave akarongedzwa zvakanaka-pakuguma kwezuva, chikamu chakawanda chechikamu chekutarisira chinopesana nechikamu chinokosha chinokosha pakubudirira kwe sangano. Jack Welch, mutungamiri mukuru weGener Electric uye mutungamiri wenhevedzeri, anozadza chikamu chitsva cheHurm: "Tizai kuungana uye zuva rekuzvarwa uye zviitiko zvekuzvarwa. ... Yeuka, HR inokosha mumamiriro ezvinhu makuru, HR inowanikwa mumamiriro ezvinhu akaoma" (Frasch , et. al., 2010).
Zvakakosha kushevedza kune pano, pane yekutanga yekutsvaga pfungwa yezviri mukati, mutungamiriri wega wega ane chikamu chekuzivisa nehutungamiri hwevanhu. Nokuti hatina musoro weHR director hazvirevi kuti hatisi kuzoita zvose kana kuti hapana chimwe chinhu chikamu chemahofisi eHRM. Semuenzaniso, vazhinji vatariri vanochengeta mari, kukurudzirwa, nekuchengetedza vashandi-kuita maonero aya chikamu cheHRM pamwe nechikamu chekutungamira. Nokudaro, bhuku iri rinokoshawo kune mumwe munhu anofanirwa kuva mutungamiriri weHR uye kune mumwe munhu achabata nebhizimisi.
Yeuka kuti zvinhu zvakawanda zveHurm zvinoshandiswa zvakasiyana nemamwe madzishe ehofisi anoita, ndicho chinhu chinoita kuti data iyi idikanwe, pasinei nekuitwa kwavanoita. Nyanzvi dzakawanda dzinopindira pane zvikamu zvinomwe zvakakosha izvo HRM inotamba mumasangano. Izvi zvinoratidzwa mune zvikamu zvinotevera.
Iwe unoda vanhu kuti vaite zvinyorwa uye basa rakakwana musangano. Zvechokwadi, kunyange nemichina yakawanda kwazvo, vanhu vachiri kudiwa. Pakati pemitemo iyi, chimwe chezvinhu zvinokosha muHurm ndezvevashandi. Basa rekushandisa rinosanganisira nzira yose yekuwana kuburikidza nekupa basa pakuronga bundle remari. Muchikamu chebasa rekushandira, mune humwe hukuru hunobudirira:
Kuvandudzirwa kweurongwa hwevashandi. Urongwa uhwu hunoita kuti HRM inzwisise nhamba yevanhu vatinofanira kushandisa mune zvido zvemari.
Kuvandudza mitemo yekukurudzira maonero evanhu vakawanda mumabasa. Multiculturalism munzvimbo yebasa iri kupedzisira ichiwedzera kukuvadza, sezvo tine vanhu vazhinji vanobva kune imwe nheyo yezvidzidzo mubasa.
Enlistment. Izvi zvinosanganisira kuziva vanhu kuti vazadze nzvimbo dzakasununguka.
Kutsunga. Muchikamu chino, vanhu vachasangana nekusarudzwa, uye yakakodzera mubhadharo bundle ichagadzirirwa. Iyi nzira inotungamirirwa kuburikidza nekugadzirira, kuchengetedza, nekufuridzirwa.
Kushamwaridzana kwega kwega kune mazano ekutsigira kunzwisisika nekubatana mukati memusangano. Imwe yebasa raHRM ndeyekuvaka verbiage yakazara nemitemo iyi. Mukufambira mberi kwemitemo, HRM, vatungamiri, uye vakuru vakuru vanoshamwaridzana nemitemo. Semuenzaniso, nyanzvi yeHurm ichave yakanzwisisa kudikanwa kwechirongwa kana kupesana mukugadzirisa, kutarisa manzwiro ekutaura, kunyora urongwa, uye mushure mezvo izvi zvinoratidza nzira iyo kuvashandi. Zvakakosha kucherechedza pano kuti HR masangano haagoni uye haagoni kushanda oga. Zvose zvavanoita zvinoda kusanganisira imwe neimwe kupatsanurana musangano. Maitiro mashomanana emakambani emabasa angave ari anotevera:
Dzidzisa nzira yekutaura
Nyanzvi dzeHurm dzinoda kusimbisa kuti mubhadharo unonzwisisika, unosangana negeji gauges, uye unokwana zvakakwana kukwezva vanhu kuti vashandire sangano. Mubairo unobatanidza chipi nechipi mushandi anowana nokuda kwebasa rake. Uyezve, nyanzvi dzeHRM dzinoda kuvimbisa kuti mari iyo inenge yakangofanana kune vamwe vanhu vanoita mabasa akafanana ari kubhadharwa. Izvi zvinosanganisira kugadzirisa zvikwereti zvebhadha zvinofunga nezvehuwandu hwemakore pamwe nesangano, makore ekuziva, kudzidziswa, nekuenzanisa. Mhosva dzevashandi vemari dzinosanganisira iyo inotevera:
401 (k) (retirement designs)
Kudzidzisa mari yekubhadhara
Sezvo iyi isiri yakazara, kubhadharwa kunoongororwa kubatsira muChitsauko 6 "Mitsva neZvibatsiro".
Kugadzirisa kunosanganisira kuchengeta nekusimudzira vashandi kuti varambe vari nesangano. Mubairo inonyanya kukoshesa mukuchengetedza mumiririri, zvisinei kune zvimwe zvinhu zvakasiyana. 90% yevashandi vanosiya sangano nokuda kwezvikonzero zvinotevera:
Nharo dzakapoteredza basa ravari kuita
Matambudziko ane mukuru wavo
Kusina kukodzera nemaitiro echihedheni
Nzvimbo isina urombo yepamabasa
Pasinei neizvi, 90 muzana yevatariri vanofunga kuti vamiririri vanobva nekuda kwebhadharo (Rivenbark, 2010). Nokudaro, madzishe vanoedza kuchinja bhadharo dzavo kuti vadzivirire vanhu kuti vasiye, apo mubayiro haisi chikonzero chavari kusiya neimwe nzira. Chikamu 7 "Kugadzirisa uye Kukurudzira" uye Chitsauko 11 "Ongororo Yevashandi" vanoongorora maitiro mashomanana ekutora vamiririri vakanaka pane izvozvi zvina.
Apo patakaisa simba rekutsvaga vamiririri vatsva, tinoda kuve nechokwadi kuti vakagadzirira kuita basa racho uye kuramba vachikura nekukura maitiro matsva mumabasa avo. Izvi zvinoguma kubudirira kwepamusoro kwechikwata. Kugadzirira kuri kuwedzerwa chikamu chikuru mubasa rakafuridzirwa. Vamiririri vanofunga kuti vari kuvaka maitiro avo vane chido chekufara zvikuru mumabasa avo, izvo zvinounza nezvekuwedzera kushandiswa kwevashandi. Mhosva dzekugadzirira mapurogiramu dzinogona kusanganisira zvinotevera:
Basa rakanaka kugadzirira, somuenzaniso, kuti ungashandisa sei purogiramu yakasiyana yePC
Boka yekuvaka maitiro
Kugadzirisa nekugadzirira zvakagadzirirwa, somuenzaniso, mufambiro usina kukodzera kugadzirira uye tsika dzakagadzirirwa
Vanhu vane pfuma yevanhu vanofanira kuziva nezveimwe yemitemo inobata basa. Imwe nyanzvi yeHurm inogona kushanda nemimwe yemitemo iyi:
Mishonga yepamusoro inotarisirwa
Bhadhara zvinodiwa, somuenzaniso, mubhadharo wakaderera wakabvumirwa nemutemo
Mitemo yekuchengeteka kwevashandi
Mamiriro ezvinhu ehurumende yeHRM anogara achishandura, saka HRM inofanirwa kuziva nezvekuchinja kunoitika uye mushure mokunge ichitaura zvishoma nezvishoma kusvika kune vese sangano revatungamiri. Kusiyana nekutaura chikamu chakakomberedza mitemo yeHRM, tichagadzirisa mitemo iyi mune chimwe chikamu chinokosha.
Zvimwe kunze kwezvikamu zvechokwadi, hukama hwakakura hwehukama uye hutungamiri hunoshamisa hwehutano hwakakosha kuhutano hwehutungamiri hwevanhu uye kuwedzerwa hutungamiri huzhinji.
Kunyange zvakadaro kutarisira mukati mechikonzero, HR mutungamiri anofanirwa kutarisa masimba emunharaunda ari kutamba anogona kuchinja sangano. Kunze kwemasimba, kana zvipimo zvekunze, ndiyo zvinhu izvo sangano risina kutora nguva pfupi; chero zvakadaro, vangava zvinhu zvinogona kusimbisa kana kuchinja zvakakwana vanhu. Kunze kwakasiyana-siyana kunogona kusanganisira ichi chinotevera:
Kudyidzana kwepasi pose uye kuvhiringidza
Kuchinja kumutemo webhizimisi
Mishonga inobhadhara mari
Zviremerera zvakasiyana-siyana zvevashandi
Kuchinja kwehupfumi hwehupfumi hwevashandi
Anonyanya kuongororwa vashandi
Kugadzikana uye kuwedzera shure
Innovation inoshandiswa, somuenzaniso, HR ma database
Kuwedzerwa kushandiswa kwenguva refu kusinganzwisisiki kwekutaurirana kuparadzira dhiyabhorosi kuvashandi
Dzimba dzokudzidzisa Dzimba muGurgaon